Amazon misintona hoverboards ny fiarovana tahotra - News Fitsipika
Amazon misintona hoverboards ny fiarovana tahotra
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Amazon misintona hoverboards ny fiarovana tahotra” dia nosoratan'i Alex Hern, fa theguardian.com tamin'ny Alatsinainy 14 Desambra 2015 09.07 UTC
Amazon no nanomboka ny hisintona ny sasany avy amin'ny fivarotana hoverboards taorian'ny tahotra momba ny afo vokatry ny tena mahay mampifandanja môtô.
Maro ny hoverboards izay efa namidy tamin'ny Amazon ankehitriny nanjavona, ao anatin'izany ny dimy modely rehetra indray mandeha nandinika ny mpanjifa raharaha toerana BestReviews. Izany toerana mampitandrina izao dia-ho mpividy fa "amin'izao fotoana izao, dia tsy manolotra na hoverboards mandra-voaporofo mba ho azo antoka ".
Araka ny iray hoverboard mpivarotra, Swagway, ny aterineto no takiana Retailer mpanamboatra mba hanome ny antontan-taratasy manaporofo fa ny fiara "dia compliant amin'ny fiarovana azo ampiharina ny fitsipika", miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'ny bateria sy ny lovia ny vondrona.
Toy ny farany Krismasy 'tsy maintsy-manana fanomezana elektronika, selfie tapa-kazo, hoverboards indrindra no vokarina amin'ny ampahany any Shina talohan'ny novidiny tamin'ny ampahany amin'ny resellers izay mampihatra tarehy retouching sy ny marika. Tsy toy ny tapa-kazo selfie, na izany aza, hoverboards misy lehibe vatoaratra, izay mety ho lehibe Hazard raha misfire.
Tamin'ny herinandro lasa, ny hoverboard nipoaka tao amin'ny tsenambarotra iray ao Washington fanjakana, fandefasana mpiantsena ho tahotra. Na dia tsy nisy naninona, ny fipoahana nanao lohateny lehibe maneran-tany.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra, Grande-Bretagne ny varotra fitsipika fahefana Nampitandrina mpividy mba mitandrema, ary nanambara fa 88% ny hoverboards nafarana avy any ivelany ny EU, fa efa notsapaina, tsy nahomby fototra fiarovana taratasim-bola.
Tamin'ny fotoana, Leon Livermore, lehiben'ny mpanatanteraka ny nanofa Trading Standards Institute, nanao hoe:: "Mpanao heloka bevava sy tsy fandraisana andraikitra mpanamboatra dia matetika hanararaotra ambony fitakiana sy miezaka mba hanafotra ny tsena mora vidy sy mampidi-doza amin'ny vokatra. Misy vokatra izay atao any ivelany, indrindra fa ny ampitan-dranomasina tsena, tsy manify ny marina sy ny nipoiran'io fitroarana plug ho ampiasaina ao amin'ny UK. Toy ny kely indrindra, mpanjifa dia tokony hanamarina fa ny telo-Pin plug ny fitaovana firenena maro no natao BS1363. Raha tsy ahitana izany vaovao, dia aza mividy ny vokatra. "
Mpividy dia tokony ho azo antoka ihany koa izy ireo hahatakatra ny maha ara-dalàna ny fampiasana ny hoverboard, izay tsy ara-dalàna ho nitaingenanao hatrizay nanananao ahy eo amin'ny lampivato na ny lalana ao amin'ny UK.
Na dia eo aza ny anarana, hoverboards raha ny marina manakodiava manerana ny tany amin'ny kodiarana.
34505	0 David Cameron, Eoropa, vondrona Eraopeanina, Frantsa, Anarana iombonana amin'ny teny, Getty Images, Philip Hammond, Syria, The Guardian, fanjakana mitambatra
← Inona no zavatra mitafy fiantraikany eo amin'ny fihetseham-po The 25 lalao tsara indrindra ny 2015: 25-21 →